१ करोड २५ लाख भारुमा दर्शनाले किन्यो ‘दिलवाले’, शाहरुख खानले नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने – Gulmiews
१ करोड २५ लाख भारुमा दर्शनाले किन्यो ‘दिलवाले’, शाहरुख खानले नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने
December 15, 2015 Sanju Kauchha
No comments	२९ मंसिर, काठमाण्डौ । आउदो शुक्रबार देखी व्रल्ड वाईड रिलिज हुने शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘दिलवाले’लाई नेपालको चर्चित बितरक कम्पनी दर्शना आर्टसले अहिले सम्मकै सर्बाधिक बढी रकममा नेपाल प्रदर्शन अधिकार किनेको छ ।
बिषेश गरी हिन्दी फिल्म बितरणमा सक्रिय रहेको दर्शनाले शाहरुख खानको यस फिल्मलाई बिषेश फिल्मका रुपमा लिएको छ । सुरुमा हिन्दी फिल्म मात्रै बितरण गर्दै आएको दर्शनाले केहि समय अघि देखि नेपाली फिल्म समेत बिरण गर्दै आएको छ ।
विश्बमा नै बहुप्रतिक्षित मानिएको शाहरुखको ‘दिलवाले’लाई हाई बजेटमा किनेर पनि नाफा कमाउनेमा बितरक कम्पनी ढुक्क छ । शाहरुखकै कारण महङगो मुल्यमा फिल्म किनेको दर्शनकाका प्रबन्ध निर्देशक गोबिन्द सापकोटाले बताए । उनका अनुसार बलिउड स्टार शाहरुखले ‘दिलवाले’ र ‘नेपाल प्रदर्शन’का बारे आज साँझ सम्ममा सामाजिक संजाल ट्विटर बाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी गराए ।
जसका लागि दर्शना आर्टसका प्रमुख दिपक अधिकारी शाहरुखलाई भेट्ने तयारीमा बम्बईमा छन् । रेड चिल्लीजको ब्यानरमा रोहित शेट्टी निर्देशित यस फिल्ममा शाहरुखका साथमा काजोल,बरुण धावन र कृति सनन मुख्य भुमिकामा छन् ।
‘दिल वाले’ संग कुनै पनि नेपाली फिल्मको प्रदर्शन मिति तय छैन । यस कारण ‘दिलवाले’ले नेपाल बाट ठुलो रकम कमाउने पक्का छ । फिल्म काठमाण्डौमा २१ पर्दा र बाहिर ९० बन्दा बढी सिनेमा घरमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।
Related Posts	गायिका शुसिलालाई मायाँले भुकम्प चलाउदा ज्यानै थर्कियो (भिडियो सहित)...	October 17, 2016	लोकगायक चन्दद्वारा प्रतिष्ठान केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी...	September 23, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ)